Javier Reverte: buugaag lagu safro adduunka, wuxuu u shaqeeyaa inuu ku noolaado | Suugaanta Hadda
Javier Reverte: Buugaag
Juan Ortiz | 07/09/2021 00:37 | Taariikh nololeed, Qorayaasha, Buugaag
Markaad webka weyddiiso wax ku saabsan "buugaagta Javier Reverte", natiijooyinka ugu waaweyn waxay u weeciyaan dhanka Africa Trilogy. Sheekadan waa mid ka mid ah shuqullada ugu caansan ee Isbaanishka; dhexdeeda wuxuu ku tusayaa aragtidiisa qaaraddan hal -abuurka leh. Reverte wuxuu ahaa musaafir xamaasad iyo xiiso leh oo yaqaan sida qalinkiisa saxda ah loogu qabsado dhowr ka mid ah baloogyadiisa adduunka oo dhan.
Markuu dhex marayay meelo sumcad leh, wuxuu qoray sharraxaad sax ah oo ku saabsan muuqaalka dhulka iyo dadka uu yaqaan. Qoraaladan, waxa uu ka turjumayay mid walba dareenkiisa iyo aragtidiisa, oo uu markii dambe ku kaabay xog taariikhi ah. Sheekadiisa hodanka ah waxay u saamaxday inuu kasbado boqolaal kun oo akhristayaal ah oo qaddarinaya inay awoodaan inay safraan mar kasta oo ay booqdaan buugaagtiisa..
1 Buugaagta ugu fiican ee uu qoray Javier Reverte
1.1 Riyada Afrika (1996)
1.2 Wadnaha Ulysses (1999)
1.3 Webiga halaagga. Safar lagu marayo Amazon (2004)
1.4 Waqtiga geesiyaasha (2013)
2.4 Waxaa ka shaqeeya Javier Reverte
2.4.1 Buugaagta safarka
Buugaagta ugu fiican ee uu qoray Javier Reverte
Riyada Afrika (1996)
Waa buug safar ah oo uu qoraagu ku sharxayo socdaalkiisii ​​Bariga Afrika oo uu ku bilaabay sheekada Africa Trilogy. Socdaalka goobaabinku wuxuu ka bilaabmaa Kampala (Uganda), wuxuu kusii jeedaa Daarusalaam (Tansaaniya) wuxuuna ku dhammaanayaa Kenya. Shaqadu waxay muujinaysaa wax badan oo ka mid ah taariikhda gobolka, gumeysigii ay ku hayeen reer Yurub iyo burburkii boqortooyooyinkii Afrika.
Xigasho Javier Reverte
Reverte wuxuu si faahfaahsan uga warramayaa socdaalkiisii ​​uu ku marayay dhul sixir ah oo ay ka buuxaan nolol, oo leh murugo iyo murugo labadaba. Sidoo kale, qoraaga waxay daaha ka qaadaysaa xidhidhkii saaxiibtinimo ee uu la dhisay dadyow kala duwan oo uu la wadaagay. Intaas waxaa dheer, inta u dhexeysa khadadka waxaa loola jeedaa qaar ka mid ah qorayaasha muhiimka ah ee booqday oo wax ka qoray qaaradda, waxaa ka mid ah: Hemingway, Haggard iyo Rice Burroughs.
Riyada Afrika ...
Ulysses Wadnaha (1999)
Munaasabaddan, reer Spain waxay ku safraan bariga Mediterranean iyo wuxuu qeexayaa booqashadiisa saddex dal oo kala ah: Giriigga, Turkiga iyo Masar. Reverte waxay kuu oggolaaneysaa inaad aragto shucuur kala duwan oo ay keeneen inaad la kulanto dhaqan, caado iyo suugaan aad u badan. Intii ay horumarinaysay, meelaha qaar ee saddexdaas ummadood waa la faah -faahiyay, sheekadana waxaa lagu dhammaystiray sheekooyin ku saabsan khuraafaadka Giriigga iyo dhacdooyin kale oo taariikheed oo khuseeya.
Halka horumarinta qoraalka ay socoto shakhsiyaadka qaarkood - dhab ah oo mala awaal ah - wakiilkii wakhtiyadii hore ayaa lagu daray. Kuwaas waxaa ka mid ah: Homer, Ulysses, Helen of Troy iyo Alexander the Great. Intii safarka lagu jiray, Reverte wuxuu kaloo xooga saarayaa goobo muhiim ah, sida xeebta Turkiga, Peloponnese, Rhodes, Ithaca, Pergamum, Corinth, Athens, Kastellorizon Island, iyo Alexandria.
Qalbiga Ulysses (Ugu Fiican ...
Webiga halaagga. Safar dhex mara Amazon (2004)
Munaasabaddan, qofka socotada ah waxaa lagu quusiyay durdur xoog badan, oo ay ka buuxaan halyeeyo iyo hibooyin: Amazon. Markay gasho biyaha Amazon, reverte waxay ka sheekaynaysaa jajabyada sheekooyinka asaliga ah. Safarku wuxuu ka bilaabanayaa Juun 2002 magaalada Arequipa, ee koonfurta Peru. Hadafka ugu dambeeya ayaa ah in la gaaro halka uu ku dhashay qaan -gaarkaas: Nevado del Mismi.
Marxaladdiisa, marka lagu daro barashada magaalooyinka iyo magaalooyinka qaarkood, Reverte waxay sidoo kale la falgashaa dadka deggan bangiyada durdurka khuraafaadka ah. Jidku wuxuu dammaanad qaadayaa raacitaanka doonyaha rakaabka, doonyaha iyo xitaa diyaarad dhowr jeer. In kasta oo uu ku dhacay cudurka duumada, haddana qoraagu wuxuu maareeyaa inuu soo kabsado oo uu dhammaystiro safarkiisa Badweynta Atlantika ee Brazil.
Waqtigii geesiyaasha (2013)
Waa sheeko ku saabsan nolosha Jeneraal Juan Modesto, yaa u adeegay hogaamiyaha ciidamada shuuciga ee dagaalkii sokeeye ee Spain. Sheekadu waxay bilaabmaysaa bishii Maarj 1939 -kii, intii lagu jiray maalmihii u dambeeyay ee iska -horimaadkii hubaysnaa. Jamhuuriyeyaashu waxay isu diyaarinayaan inay xukunka ka baxaan oo Francoists -ku waxay ku sii gudbaan guushii ugu dambeysay. Waqtigaas, Modesto - oo ay weheliyaan shaqaale kale oo milateri - ayaa abaabulay bixitaanka dawladda.
Sheekadu waxay sharraxaysaa dhinacyo ka mid ah nolosha shaqsiga ee guud, sida xusuusta carruurnimadiisii ​​iyo jajabyadii yaraa ee noloshiisii ​​jacayl. Dhanka kale dagaaladii uu galay ayaa dib loo tirinayaa iyo sida ay ciidamadu uga gudbeen cabsidoodii. Daacadnimada iyo wehelnimada, ayaa askartii ka buuxisay geesinimo si ay uga gudbaan daqiiqadihii ugu adkaa.
Waqtigii geesiyaasha ...
Javier Martínez Reverte Wuxuu ku dhashay Jimce, July 14, 1944 magaalada Madrid. Waalidkiis waxay ahaayeen: Josefina Reverte Ferro iyo saxafiga Jesús Martínez Tessier. Tan iyo yaraantiisii ​​wuxuu soo jiitay xirfadda aabbihiis, wax laga arki karo hammigiisa qorista. Maaha wax aan micne lahayn wuxuu go’aansaday inuu ku sii socdo daraasaadka jaamacadda ee Falsafadda iyo Saxaafadda.
Ka dib qalin -jabinta, Wuxuu ka shaqeynayay in ka badan soddon sano wariye ahaan warbaahinta Spain ee kala duwan. Khibradiisa shaqo waxaa ka mid ah 8-dii sano (1971-1978) oo ahaa weriyihii saxaafadda ee magaalooyinka sida London, Paris iyo Lisbon. Intii uu xirfadiisa ku jiray wuxuu sidoo kale ka shaqeeyay shaqooyin kale oo la xiriira mihnadiisa, sida: weriye, taariikhyahan siyaasadeed, qoraa tifatire, iyo tifaftire guud.
Tallaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay ee qoraa waxay ahaayeen qoraallo loogu talagalay barnaamijyada raadiyaha iyo telefishanka. Horraantii 70 -meeyadii wuxuu xoogga saaray laba ka mid ah damacyadiisa: suugaanta iyo safarka.. 1973kii wuxuu si rasmi ah u soo galay saaxadda isagoo wata suugaan Tacaburka Ulysses, ka shaqee halka uu ku qabsaday qaar ka mid ah waaya -aragnimadiisa sida globetrotterter.
80 -kii 'wuxuu ku dhiirraday noocyo kale: sheeko iyo maanso. Waxay ku bilaabatay daabacaadda sheekooyinka: Maalinta xigta ilaa ugu dambaysa (1981) iyo Dhimasho aan loo baahnayn (1982), iyo markii dambe ururinta maansooyinka Metropolis (1982). Wuxuu sii watay buugaagtii safarka wuxuuna 1986 soo bandhigay sheekooyinkiisii ​​ugu horreeyay: Trilogy -ga Bartamaha Ameerika. Kani wuxuu ka kooban yahay saddex sheeko -wadaag oo uu ku sifeeyay sannadihii adkaa ee gobolka muddadii lagu jiray.
Reverte waxay dhistay faylal suugaaneed oo aad u ballaadhan, oo wadar ahaan 24 qoraal ka soo qaatay socdaaladiisii ​​uu ku soo maray daafaha dunida, 13 sheeko -wadaag, 4 maanso iyo sheeko gaaban. Waxaa ka mid ah shaqooyinkiisii ​​ugu fiicnaa: Riyada Afrika (1996, Africa Trilogy), Ulysses Wadnaha (1999) Raadadka Joogitaanka (2005) Webiga iftiinka. Safar lagu marayo Alaska iyo Kanada (2009) iyo shaqadiisii ​​dhimashada kadib: Nin biyo (2021).
Intii uu ku jiray xirfadiisa qorista waxaa la guddoonsiiyey saddex jeer. Midda koowaad, gudaha 1992 oo leh abaalmarinta buugaagta Madrid ee Novel Prize ee Nin dagaal. Kadibna 2001 u helay Magaalada Novel ee Torrevieja loogu talagalay Habeenkii wuu istaagay (2000). Ictiraafkiisii ​​u dambeeyay baa soo galay 2010, la Fernando Lara de Novela for Xaafadda Zero.
Javier Reverte wuxuu ku dhintay magaaladiisii, Oktoobar 31, 2020. Tani, wax soo saarka kansarka beerka.
Waxaa ka shaqeeya Javier Reverte
Tacaburka Ulysses (1973)
Trilogy Central America:
Ilaahyada roobka. Nicaragua (1986)
Udugga Copal. Guatemala (1989)
Ninka dagaalka. Honduras (1992)
Ku soo dhowow Jahannamo. Maalmaha Sarajevo (1994)
Vagabond ee afrika (1998)
Waddooyinka Afrika ee lumay (2002)
Wadnaha Ulysses. Giriigga, Turkiga iyo Masar (1999)
Hal tigidh (2000)
Isha dareenka (2003)
Hal -abuurka safarka (2006)
Heesta Mbama (2007)
Webiga iftiinka. Safar lagu marayo Alaska iyo Kanada (2009)
Badaha duurjoogta ah. Safarka Arctic (2011)
Buuraha gubanaya, harooyinka dabka (2012)
Muuqaallada dunida (2013)
Heesta Irland (2014)
Dayr romaan ah (2014)
Xagaagii Shiinaha (2015)
Wuxuu soo afjarayaa (2018)
Suite Talyaani (2020)
Maalinta xigta ilaa ugu dambaysa (1981)
Dhimasho aan loo baahnayn (1982)
Beeraha Strawberry weligiis (1986)
Marwada yaamayska (1988)
Dhammaan riyooyinka adduunka (1999)
Habeenkii wuu istaagay (2000)
Dhakhtarka Ifni (2005)
Boqortooyadaadu ha timaado (2008)
Sayid Paco (1985)
Xaafada Zero (2010)
Waqtiga geesiyaasha (2013)
Calanka ku jira ceeryaanta (2017)
Nin dul saaran (2021)
Folkaanaha dhaawacmay (1985)
Raadadka Joogitaanka (2005)
Gabayadii Afrika (2011)
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Buugaag » Javier Reverte: Buugaag
Francisco de Quevedo. Sanad guuradii geeridiisa. Sonnets
Marta Gracia Pons. Wareysi lala yeeshay qoraaga Socdaalka Dragonfly